भारतीय प्रधानमन्त्री र सञ्चारकर्मी लाई योगीको खुल्ला पत्र - Purbeli News
प्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०८, २०७७ समय: १७:४०:०६
भारतीय प्रधानमन्त्री ज्यू
नेपाल र नेपालीको कमजोरीको विषयमा बोल्नु भन्दा अगाडि आफुलाई हेर्ने प्रयास गर; महाभारतको युद्धमा कौरवका हजारौं सेनाबिच पनि पाँच पाण्डवको जित अर्थात सत्यको पक्षमा रहेको जित इतिहासमा जिवितै छ; नभुल । नेपालीलाई भारतको केही गुण देखिन्न, चाहे इतिहासमा होस्, चाहे वर्तमानमा, चाहे आत्मिक होस्, चाहे भौतिक । भूमि कसको हो त भन्दा मलाई स्मरण हुन्छ, “सिद्धान्त र धर्मको कुनै सिमाना हुदैन”, तर आफ्नो जन्म दिने आमा र जन्मभुमि बाहेक स्वर्गको आनन्द पनि नर्क बन्छ ।
नेपालले भारतलाई दिएको कुरामा हाम्रो दुःख हैन, न त तिम्रो भ्रमित कुरामानै गुनासो छ ! सत्य केवल सत्य हुन्छ; जतिसुकै भ्रम गरे पनि सत्य लुकाउन सकिदैन । जसरी सुर्यको प्रकाश छेक्न सकिदैन, खोलालाई पनि रोक्न सकिदैन, हावाको गति छेक्न सकिदैन, त्यस्तै नेपालको भुमिबाट लिएको ऋण र नेपालको गुण हजारांै वर्षको तपस्याले पनि तिर्न सक्दैनौं । यदि तिर्ने प्रयास गरेको अवस्थामा तिमी भारत र भारती हैन, नेपाल र नेपाली भएर बस्न बाध्य हुनेछौ ।
नेपाल र नेपालीले इतिहासदेखि वर्तमानसम्म यदि फिर्ता भए, अस्तित्व बिहीन रहने कुरा नभुलेको राम्रो । देखावटी र भौतिक कुराको ऋण त सजिलै हामी तिर्न सक्छौं तर नेपाल र नेपालीबाट केही नचाहने हो भने इतिहासदेखिकै हिसाब गरौं जस्तो लाग्यो । तिम्रा आडम्बर, भौतिक कुराको हिसाब आउला ! तिम्रो देश भित्र हिन्दुहरुको आस्थाको केन्द्र राम मन्दिर, जसको पक्षमा मुिस्लम समुदायमा इतिहासदेखि लड्दै आएको याद होला । त्यही आस्थाको केन्द्र उत्तर प्रदेशको राम मन्दिरको वार्षिक हुने बिवाह पञ्चमीमा नेपालको जानकी मन्दिर आउन बन्द गर्ने त ? करौडौं आस्थाका केन्द्र पुरुषोत्तम भगवान राम हाम्री सीता बिहीन रहन सक्छन् त ?
कसरी राम भगवान रामको रुपमा रहन सक्छन् सीता बिना ? यो कुरा मलाई थाहा छ, र तिम्ले पनि बुझ््नेछौ; उनी भगवान हुन्, तिमीहरुको निजी स्वार्थले छुटाए पनि रामले छोड्ने छैनन् ? सीता माताबिना राम पूर्ण हुने छैनन् । राम सीता बिना पूर्ण नभएको कारणनै जानकी मन्दिर बिना राम मन्दिर कसरी पूर्ण हुन्छ त ? सायद तिमीहरुको भौतिक र भ्रामक कुराबाट पछिसम्म नेपाल जस्तो पवित्र भुमिमा गीद्धे नगर लाउँछौ की भन्ने डरले भगवान रामले सीतासँग विवाह गरे होला; अनि रामसँग जति नि दुःख–कष्ट झेले पनि आफ्नो जन्म भूमिको पवित्रता माथि सीतामाता लडिन् ।
यस भूमि जोगाउन सीताको दुःख र संघर्ष रहेकोछ, जसलाई तिमीहरुले प्रयोग गरेको नभुल । त्यति मात्र कहाँ होर, अशान्ति, अमन चयन, दुःख जस्तो अवस्थामा शान्तिको सन्देश दिने भगवान गौतम बुद्धको पनि ठुलो ऋण चुकाउनु पर्ला । हुन त भगवान बुद्ध पनि भारतकै हुन भन्न सम्म भ्याकैछौ तर सत्य र इतिहास तिम्रा कपोकल्पित कुराले छेक्ने छैन । हैन हामीले के दिएनौं भारत, भारती तिमीलाई ? नेपालमा जन्मिएका ऋषि पतञ्जलीको आयुर्वेदिक ज्ञान दिनम् कि ?
भगावन वेदब्यासलाई नेपालको पवित्र तपस्थली स्थल दिएनौं ? नेपाल कञ्चन, पवित्र भुमिबाट निस्केको जल होस्, या नेपाल भुमिमा जन्मेका हाजारांै सेना, जसले तिम्रो सिमाको रक्षा गरेका छन् ,नेपालमा जन्मेका ऋषि जसले तिम्रो बिस्वमा शिक्षाको आधार दिएकाछन् । त्यही शिक्षाको कारण तिम्रो संसारमा शिर उच्च छ । यी त केवल तिम्रो भ्रमित र तर्कहिन कुराको जवाफको लागि मात्र प्रस्तुत् गरेको हुँ । हिसाब गर्ने नै हो भने १८ पुराणका ठेली, चार बेदको ज्ञान बन्ने छन् ।
मलाई थाहा छ, सीता बिना राम पूर्ण हुने छैनन्, जानकी मन्दिर बिनाको राम मन्दिर बन्ने छैन । हजारौंको आस्था रहेको काली गण्डकीको शिलाबिना आराधना पूर्ण हुने छैनन्, आराध्य देव भगवान पशुपतिनाथको आशिर्वादबिना तिम्रो मनोकामना पूर्ण हुने छैन, हाम्रो पवित्र हिमशिखरबाट निस्किएको जलबिना तिम्रो गंगाको पवित्रता रहने छैन । हाम्रा हजारौं हजार वीर नेपाली–गोर्खालीबिना तिम्रो सिमाको रक्षा सम्भव छैन । बुद्धको शान्तिको सन्देशबिना न त शान्ति रहनेछ । हो, हामी चाहे भौतिक होस् या धार्मिक, या आत्मिकै, हामी सधैं दिने हो; सधै तिम्रो हात तल नै रहन्छ । मलाई बिस्वास छ, यो सबै कुरा गुमाउन सम्भव छैन । मेरो बिचार कुनै धार्मिक सिद्धान्तको बिरोध हैन, केवल मेरो उत्तर भ्रमित कुराको वकालत गर्ने मात्र हो ।
योगी कर्मयोग पिठ नेपालका संस्थापक हुन
भारतबाट २५० मेगावाट विद्युत् आयात गरिने